Vakadzi protagonists venhasi dema diki yekwake nyika | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Mabhuku, Nhema nhema
Tinorarama a zera regoridhe kune makuru echikadzi mavara iyo, chero zvakadaro, yakagara iri mumabhuku. Asi ndizvo mumhando nhema vari kupi iye zvino kuwana kwavo akakwirira mazinga ekuzivikanwa uye kubudirira. Saka ndinomhanya nepakati peavo mazita enhoroondo yedu yematsotsi kunyanya, kunyange na kutaurwa kwevamwe vatorwa nezvakaitika. Izvo zvakasikwa nevose varume nevakadzi vanyori, iyo yakanaka kwazvo kune yakasarudzika seyakanzi kuenzana.
2.6 Nyasha Saint Sebastian - Ana Lena Rivera
Zvirokwazvo kwete. Jane Marple, lkuna Miss Marple, Yakagadzirwa nemukadzi mukuru wepasirese wezvakavanzika aive Agatha Christie, ndiye imwe yekutanga uye inozivikanwa vakadzi protagonists veiyo genre. Ehe, iwo matsotsi kana zvakavanzika zvinyorwa pane izvo zvinotsanangurwa nhasi sedema. Asi kunyangwe paine huwandu hwematsotsi kana iwo mafomu akaomarara kana mashoma, ungwaru, hunyanzvi uye basa rakanaka naJane Marple kugadzirisa iwo makesi Inogara ichishanda.
Ari kure wako dapper French waunoshanda naye ... ndine hurombo, Belgian, Hercule Poirot, iyo yeBritish yakanyanya kupfuura iyo 5 o'clock tea uye zvakare Zvimwe zvinonakidza Miss Marple.
Hapana mubvunzo la Hacker Mukadzi weSweden ane maTattoo, hunyanzvi hwake uye hunhu hwake husingakundike, anotara pamberi uye shure mukuwedzera kwevakasimba uye vanesimba vakadzi protagonists mune genre. Larsson akawana bharanzi yakanaka mukusika kwayo uye neyemurume protagonist, mutori wenhau Michael Blomkvist. Kunyangwe akaba zvese zvinoonekwa mune iro rekunyora bhomba iro raive, uye nanhasi riri saga Mireniyamu. Lisbeth akaridza pfuti yekutanga uye simba rake, charisma yake uye mufananidzo wake hazvina kumbobvira zvakaenzana.
Giménez-Barlett ari piyona mukuvakwa kweanotungamira munhukadzi chimiro mune dema genre. Muchengeti wake wemapurisa Petra Delicado, uyo anoshanda mu Barcelona, akaonekwa kekutanga kekutanga Tsika dzerufu of 1996.
Delicate yakaratidza poindi ye kuomarara kwakasanganiswa nekunzwisisa uye kufungidzira, kuwedzera kuhunhu hwakavanzwa mukunyengera. Muhupenyu hwake hwehunyanzvi ari chaizvo kugona uye kusarudza, uye hupenyu hwake hwepachivande nehunhu hwakazvimiririra sekumhanya-mhanya. Muchidimbu, a muenzaniso wakanaka kupinda mumhando.
El ichangoburwa chiitiko cheye nhema nhema yekumusha anga ari aCarmen Mola (pseudonym izvo zvinowedzera kuwedzera chakavanzika) uye yake, kwechinguvana, zvinyorwa zviviri zvinotarisana nemuongorori weMadrilenian Elena Blanco. Yakaratidzwa munzanga mu Mwenga wechiGypsy uye akaenderera mukati Mambure epepuru.
Zvipikiri pamusoro nyaya dzakakodzera Noir yakanyanya kuomarara uye ine hutsinye izvo zvakaitika munguva pfupi yapfuura muzvikamu izvi, Elena Blanco anogona kunge ari iye seti yemakoni ese uye zvimisikidzo zvakachengeterwa vanhurume mavara echinyakare protagonists yemhando. Akasimba muhunhu uye anotambudzwa nekutsakatika kwemwanakomana wake, aine tsika yeku kuzviparadza, hwehupenyu hwakaoma kana husina hupenyu hwakaomarara. Uye, chokwadi, kusarudza uye simba mubasa rake, uyewo pasina zvivako. Yakanaka kune vaverengi vanoda kuzvinyudza mune iyo genre vasina anesthesia kana hupenyu hwejaketi.
La futuristic mutikitivha rakanyorwa naRosa Montero, a replicant mumutemo wese, wakagadzirwa ku Misodzi pamusoro pemvura inonaya, kunamata kune sci-fi movie classic senge chipande Runner, kunyangwe iine hwaro hwezvinyorwa mune nyaya yeiyo genre na Philip S Dick.
Tinosangana naHusky mu Madrid ye2109 uko huwandu hwekufa kwevanodzokorodza vanongoerekana vapenga wawedzera. Uye kunyangwe uri mune iyo isina kugadzikana nzanga yenguva yemberi, hunhu huripo hunogara hwese uye husina nguva, kunyangwe iwe uri replicant, hasha, unonzwa zvisizvo uye unozviwana uri muzuvaa.
Yevachangobva kusvika pachiitiko cheakanaka echikadzi mhosva dzevanyori protagonists isu tine Antonia Scott, chisikwa chazvino kwazvo yemunyori mune izvo Dzvuku Mambokadzi. Hatisi kubva kuMadrid, ino nguva kubva Lavapies, kunogara Antonia, mukadzi akasarudzika ane kungwara kunoshamisa iyo yakaponesa hwakawanda hwehupenyu, asi zvakare yakarasikirwa nezvose. Saka haadi kubuda munyika zvakare. Asi iye achadaro, uye izvo zvaakawana kwave kuri kupenya uye kubata munhu wese.
Nyasha Saint Sebastian - Ana Lena Rivera
Zvakare mumwe mutsva, muongorori wekubiridzira, gadzirwa na Ana Lena Rivera en Izvo vakafa vanonyarara, yagadzira niche mune panorama yeakanaka echikadzi anotungamira mavara. Ino nguva en nyaya inosanganisa zvakavanzika, kutsvagisa uye hunhu chaizvo yenharaunda (kunyanya Oviedo) iyo inoperekedza vese vanozivikanwa vechipiri mavara.
Nyasha Musande Sebastian futi inoratidzirwa nekurasikirwa nemwana, yakangwara, inonzwisisika uye inoshanda, uye imba yako nemhuri yako zvakakosha zvikuru. Saka ichadzoka nemamwe mazita munguva pfupi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Vakadzi protagonists venhasi dema nhorowondo kumusha